वीर बहादुरको मानोमानीले कर्मचारी आजित, भ्रष्टाचारलाई उर्जामन्त्रीको साथ ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
वीर बहादुरको मानोमानीले कर्मचारी आजित, भ्रष्टाचारलाई उर्जामन्त्रीको साथ !
Posted by Dilip Kunwar | ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १७:०६ |
३१ जेठ, रोल्पा । ‘अब तपाईंको कार्यकाल ४ बर्ष बाँकी छ, हामी जनताको सेवा गर्न भनेर राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौ, तपाई सुकिदहलाई भ्रष्टाचारको बाटोतिर लैजादै हुनुहुन्छ, हामी यस्तो काम कदापि हुन दिदैनौ’ – रोल्पाको सुकिदह गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेवत बुढाथोकीले कार्यालयमै अध्यक्ष वीर बहादुर खत्रीलाई झपारे ।
अनेकन बिबादमा मुछिएका गाउँपालिका अध्यक्ष खत्री राम्रो कुरा त कहाँ सहन सक्थे र एक्कासि रिसले चुर भएर कराउन सुरु गरे । केही महिना पहिले उपाध्यक्ष रिता घर्ती संग बिबाद हुदा यीनैले कार्यालयका टिभी तथा अन्य सामाननै तोडफोड गरेका थिए ।
‘शान्तस्वभावका अधिकृतले गाउँपालिका समृद्ध बनाउने योजना ल्याउदा समेत सुन्दैनन्हु, नत किन सुन्थे र खाना पल्कीएकाहरुले’- त्यहाँ एक कर्मचारीले गुनासो गरे । खत्रीले सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोज्दा बिबाद हुने गरेको छ ।
केहिदिन अघि अध्यक्ष खत्रीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोजेपछि अधिकृत बुढाथोकी र वीर बहादुरको झन्डै हात हालाहाल भएको भयो । अध्यक्ष र अधिकृतको झगडाले ठुलै रुप लिन खोजेपछि छेउमै रहेका वडाअध्यक्ष जलेश केसीले हात हालाहालको अबस्थालाई साम्य पारेको सुकिदह गाउँपालिका श्रोतको दाबी छ ।
गाउँपालिकामा हुने बिकासे कामहरुमा आफु निकटका मान्छेहरुलाई अध्यक्ष खत्रीले जिम्मेवारी दिन खाजेपछि कर्मचारीहरुले त्यसको बिरोध गरे । कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार वीर बहादुरले बाटो खन्ने नाममा लाखौं रकम कुमल्याएको आरोप लगाए । उनले आफु निकटकालाई १ लाखमै हुने काम ५ लाखमा दिने, काम भने ५० हजार जतिको पनि नगरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उनको खुलासा छ । काम लिने मान्छे र उनको मिलेमतो भएको उनकै डोजर समेत प्रयोग हुने गरेको बताईन्छ ।
‘अध्यक्षको कार्यशैली गाउँको बिकास भन्दापनि मिलेर खाउ भन्ने तरिकाको छ अनि कसरी बिकास हुन्छ? ‘ उनी निकटकै एक कर्मचारीले भने । ‘हामी आजित भयौ अनि केही दिन त आन्दोलनमै समेत उत्रिएका हौ’ उनले थपे । वीर बहादुरले पेल्न खोज्दा उनीहरुले कामकाज नै ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका थिए ।
उनका २ वटा नागरिकता छन् भनेर समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको महिनौ भयो । अहिले सम्म नागरिकता छानबिन कहाँ पुग्यो प्रशासन मौन छ । प्रशासन श्रोतका अनुसार बर्षमान पुनको आडमा छानबिन रोकिएको बुझिन्छ ।
Previousपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फिर्ता
Nextटिप्पणी : सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ‘…खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै !
कारबम आक्रमणमा तीनको मृत्यु आठ घाइते
८ चैत्र २०७३, मंगलवार १४:१२
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको ४० रोपनी जग्गाको मासिक भाडा १ रुपैयाँ !
२१ जेष्ठ २०७४, आईतवार १०:२९
उपत्यकामा रगतको अभाव, रक्तदान गर्न रेडक्रसको आह्वान
१८ चैत्र २०७४, आईतवार १८:२६
के हो फल मेकोडामीयानट ? प्रतिगोटा तीन सय ५० रुपैयाँ ,जसको इलाममा व्यवसायिक खेती सुरु भएको छ !
२८ असार २०७४, बुधबार ०८:१६